Somaliland Oo Walaac Ka Muujisay Xaaladaha Isbeddellada Ka Dhacay Itoobiya, Xuduudka Dawladda Deegaanka Soomaalida Iyo Doorka Farmaajo Ka Qaatay Saluugga Abuurmay - Jigjiga Online
HomeSomalidaSomaliland Oo Walaac Ka Muujisay Xaaladaha Isbeddellada Ka Dhacay Itoobiya, Xuduudka Dawladda Deegaanka Soomaalida Iyo Doorka Farmaajo Ka Qaatay Saluugga Abuurmay
Addis Ababa (JigjigaOnline) – Isbedellada ka dhacay dalka Itoobiya ee hormoodka uu u yahay Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed, waxay walaac ku abuureen Jamhuuriyadda Somaliland ee xuduudka dheer la leh, taaas oo dareensan in Abiy iyo xukuumaddiisu ay dhabarka u jeediyeen isla markaana ay ku xidhmeen Muqdisho iyo dalalka kale ee deriska ah.
Masuuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland oo la hadlay wargeyska The Reporter ee kasoo baxa magaalada Addis Ababa ayaa waxay tilmaameen in uu jiro walaac dhinacooda ay ka qabaan siyaasadda Itoobiya ee cusub ee muddadii uu joogay Abiy Ahmed ay Addis Ababa kula macaamishay.
Cabdinaasir Axmed Xirsi oo ah Agaasimaha wasaaradda Arrimaha dibedda iyo iskaashiga caalamiga ah iyo Mukhtaaar Maxamed Cali oo ah agaasimaha Wasaaradda Isgaadhsiinta, dhaqanka iyo Wacyigelinta Somaliland, ayaa waxay The Reporter u sheegeen in arrimaha ka dhacay Itoobiya ee ay ka midka yihiin heshiiska saddex geesoodka ah ee ay la gaadhay Eritrea iyo Somalia (Dawladda ku-meelgaadhka ah) ay dareen shaki leh ku abuureen masuuliyiinta Somaliland.
“Heshiiska saddexda dhinac ah waxa laga saaray Somaliland, laakiin waxa aanu jecel nahay inaanu aaminsanaano xidhiidhka xooggan ee aanu la leenahay Itoobiya,” Sidaas waxa yidhi Agaasime Xirsi oo booqasho ku jooga magaalada Addis Ababa.
Lataliyeyaaal sare oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha dibedda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa iyaguna sii xoojiyey walaaca ay dawladdoodu ka qabto danaha Diblomaasiyadeed ee Itoobiya. Tusaale ahaan, tan iyo bishii September, Itoobiya may magacaabin qunsul cusub oo beddela qunsulkii guud ee u fadhiyey magaalada Hargeysa. Waxa intaa dheer, reer Somaliland waxa walaac kale ku haya dabacsanaan amni oo ka jirta xuduudka ay la wadaagaan Itoobiya, taas oo aanay wali jirin calaamad muujinaysa inay dib ugu soo laabanayso heerkii ay hore u gaadhsiisnayn.
Maxamed Cumar Xaaji oo ah lataliye sare iyo gacan-yare ka tirsan Wasaaradda iyo Maxamed Axmed Maxamuud (Barawani) oo ah lataliye sare oo dhinaca siyaasadda ah, ayaa isaguna soo bandhigay walaaca Somaliland ee amniga xuduudka ah. Labadooduba waxay muujiyeen in Somaliland ay ku-dhowaad 40 boqolkiiba miisaaniyaddeeda ah ku bixiso ammaanka si ay Itoobiya ula wadaagto sugidda amniga xuduudka.
Masuuliyiintan Somaliland, waxa kale oo ay tilmaameen inay si dhow ula socdaan siyaasadda cusub ee Itoobiya. Si taas la mid ahna, waxay farta ku fiiqeen inay jiraan waxyaabo iyo xaalado siyaasadeed oo kasoo baxaya Itoobiya oo walaac gelin karaya Somaliland.
Si kastaba ha ahaatee, madaxdan Somaliland waxay ku adkaysteen inay ku kalsoon yihiin in wada-shaqaynta iyo istaraatiijiyadda guud la macaamilka Itoobiya.